Warbixin: Imaaraadka Iyo Qadar Oo Ku Loolamaya Somalia, Ogoow Xog Badan. – Hornafrik Media Network
Warbixin: Imaaraadka Iyo Qadar Oo Ku Loolamaya Somalia, Ogoow Xog Badan.
Tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay Dowladda Somalia qaadatay Go’aanka Dhex Dhexaadnimadda ah ee Xiisadda Khaliijka, waxaa sii xoogaysanaya Saamaynta ay Dalalka isku haya Khaliijka doonayaan inay ku yeeshaan Siyaasadda Somalia.
Diblomaasiyiinta Imaaraadka iyo Qadar ayaa u muuqda inay dhinacooda ka walaaqayaan Siyaasadda Somalia, isla markaana ka abuurayaan Xasilooni Darro Siyaasadeed Gudaha Somalia, Waxayna ku bixinayaan Dhaqaale farabadan inay Khilaafaad abuuraan, si Qolo kastaa ay ugu hesho Garab Siyaasadaheeda.
Dulaaliiin Siyaasadeed oo Soomaali ah ayeey samaysteen, kuwaasoo galaangal ku dhex leh Siyaasadda Somalia, Isla markaana u fududaynaya Qalalaasaha Siyaasadeed ee ay ka abuurayaan Somalia.
Imaaraadku waxay dhaqaale badan ku bixinayaan iska hor keenka Dowladda Dhexe ee Somalia iyo Dowlad Goboleedyadda Xubnaha ka ah, iyadoona Hawshan uu ugu xilsaaran yahay Imaaraadka Safiirkooda u Fadhiya Soomaaliya oo si toos ah ula macaamila Hogaamiyayaasha Dowlad Goboleedyadda Puntland, Koonfur Galbeed, Galmudug, iyo Hogaamiyihii hore ee Hirshabelle.
Isku Xirka hawlahan iyo Dulaalaynta waxaa Imaaraadka u qaabilsan Raiisul Wasaarihii ee Somalia, Cumar C/rashiid Cali Sharmaake oo geed fadhi u ah Siyaasadda Imaaraadka ee ku wajahan Somalia, Waxaana uu Saldhig ka samaystay Magaalooyinka Dubai iyo Nairobi, halkaas oo uu ugu yeerto Madaxda Soomaalida ah, si uu u sooryeeyo, uguna qanciyo Siyaasadda Imaaraadka ee ku aadan Somalia.
Imaaraadku waxay sidoo kale saamayn ku leeyihiin Ammaanka Dalka, iyagoo Dhaqaalaha ugu badan siiya Imaaraadka, Taliska Ciidanka Xoogga, Booliska iyo Hay’adaha kale ee Dowliga, Waxay Imaaraadku leeyihiin Xero wayn oo ay ku tababaraan Ciidamo, kuwaas oo ay iyagu u madax banaan yihiin Qorista Ciidanka ay Tababarayaan.
Ciidamo Soomaali ah oo wata Astaanta Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, isla markaana aad u hubaysan ayaa ka amar qaata Imaaraadka, kuwaas oo mararka qaarkood Jidad Muhiim u ah Isu Socodka Dadka iyo Gaadiidka xirta, sababo aan la ogayn.
Dhinaca Dowlad Goboleedyadda waxay siiyaan Imaaraadka Miisaaniyad Dhaqaale oo aan la ogayn Cadadkeeda, isla markaana aan loo soo marsiin Dowladda Dhexe ee Somalia, waxay sidoo kale Shirar u qabtaan Hogaamiyayaasha Dowlad Goboleedyadda Somalia, kuwaas oo aysan ka war hayn Dowladda Dhexe ee Somalia, Loomana soo marsiiyo Casuumaadaha Dowlad Goboleedyadda Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somalia.
Sirdoon u gaar ah ayeey ka qorteen Imaaraadka Gudaha Muqdisho, kuwaas oo u keena Macluumaadka iyo Xogaha ay u baahan yihiin, Waxay sidoo kale ku rakibteen Meelo badan oo Muqdisho ka mida Qalabka wax basaasa, iyadoo aysan ka war hayn Sirdoonka Somalia.
Safiirka Imaaraadka Gaadiidka uu u isticmaalo meelaha ay marayaaan waxay ka jaraan Isgaarsiinta oo dhan, iyadoo aan la wargalin Hay’adaha Amniga iyo Isgaarsiinta Dowladda. Waxay sidoo kale keenaan Muqdisho Gaadiid aan Xabaddu karin oo ay siiyaan cidda ay doonaan, taasoo ay dhici karto inay qatar ku noqoto Ammaanka Dalka.
Dowladda Qadar oo ah Dal yar oo ay go’doomiyeen Isbahaysiga Sucuudiga iyo Imaaraadka waxa la arkaan saamayntooda marka ay Doorasho ka jirto Somalia, waxayna markii ugu horaysay Siyaasadda Soomaaliya saamayn ku yeesheen Doorashadii 2012, markaas oo ay taageereen Xasan Sh, taasoo keentay inuu ka guulaysto Madaxwaynihii Waqtigaasi taladda hayay ee Shariif Sh Axmad.
Wixii ka dambeeyay Doorashaddii Xasan Sh lama arkin, lamana maqal Saamaynta Qadar ee Somalia, marka laga reebo Samafal aan sidaas u badnayn oo Hay’ado Qadar ah ay ka sameeyaan Somalia.
Qadar ma jiraan wax Mashaariic Horumarineed oo ay ka caawiso Somalia, sida Jidad, Waxbarasho, Caafimaad iyo Adeegyo kale toona, laakin taa badalkeeda waxay Malaayiin Doolar ku bixiyaan Doorasho kasta oo ka dhacaysa Somalia oo ay markaasi taageeraan hadba qofka ay rabaan.
Isku Xirka Howlahan iyo Dulaalaynta waxaa Qadar u qaabilsan Fahad Yaasiin oo ahaa Wariye ka tirsanaa Telefeshinka Aljazeera ee laga leeyahay Qadar, haddana ah Agaasimaha Madaxtooyadda.
Tan iyo wixii ka dambeeyay Markii ay Isbahaysiga Sucuudiga iyo Imaaraadka go’doomiyeen Qadar waxay ku badashay Siyaasadeedii hore ee Somalia, waxayna billowday inay saamayn aan u mug waynayn sida Imaaraadka inay ku yeelato Somalia, Waxayna iyada oo isticmaalaysa Fahad Yaasiin dhaqaale farabadan ku bixinayaan inay burburiyaan Danaha Imaaraadka, Laakiin iyagu uma muuqdaan inay Isticmaalayaan Istaraatiijiyad ku aadan Arrimahooda Soomaalia, marka laga reebo inay dhaqaale badan ku bixiyaan in laga hor yimaado Danaha Imaaraadka.
Qadar waxay Dhaqaale farabadan ku bixisay in Xukunka laga tuuro Madaxwaynihii Hirshabelle, Cali C/laahi Cosoble, kadib markii uu taageeray Isbahaysiga Sucuudiga iyo Imaaraadka, Waxayna sidoo kale taageereen Mid ka mida Musharixiintii u tartamay Cosoble kadib Madaxnimadda Hirshabelle, Balse Musharixii Qadar Dhaqaalaha ku bixinaysay lama dooran, taasoo ku noqotay Dhabar Jab Qadar iyo Wakiiladeedii.
Si la mid ah Hirshabelle waxay hadda Qadar dhaqaale farabadan ku bixinaysaa in Meesha laga saaro 3 Madaxwayne Goboleed oo kala ah, Axmad Ducaale Xaaf-Galmudug, Shariif Xasan-Koonfur Galbeed, iyo C/wali Gaas-Puntland, Waxayna ku bixinaysaa kiiba 5 Milyan oo Doolar in Xukunka laga tuuro, kadibna waxay wadataa Shaqsiyaad ay doonayso inay Madax ka noqdaan Maamuladaasi.
Tusaale waxay la doonayaan Galmudug, Axmad Shariif, Koonfur Galbeed ma cadda qofka ay wataan, Laakiin waa Maamulka ku xiga Galmudug oo ay doonayaan inay ka tuuraan Hogaamiyahooda, Puntland waxay la doonayaan Siciid Dani, Waxayna arrimahan oo dhan muujinayaan in Qadar ay la ficiltimayso Imaaraadka, cid kasta oo taageertana ay doonayso inay meesha ka tuurto, balse iyadu ma lahan Istaraatiijiyad intaas ka fog.
Qadar waxay sidoo kale waqti dheer taageero soo siinaysay Kooxo Diimeeedyadda Soomaalida, iyadoona Dalkeeda ku martigalisay Hogaamiyayaal ma ka tirsanaa Kooxo Argagixiso ah oo Somalia Xasuuqyo badan ka gaystay sida Cumar Iimaan oo mar ahaa Hogaamiyihii Kooxdii Xisbul Islaam, Maxamad Siciid Atam oo ahaa Hogaamiyihii Alshabaab ee Buuraha Galgalo, iyo Shaqsiyaad kale, Waxay sidoo kale doonayeen inay ku martigaliyaan Dalkeeda Sh Xasan Daahir Aways oo ku jira Gacanta Dowladda Somalia.
Telefeshinka Aljazeera ee ay Qadar maalgaliso waxa uu buun buuniyaa Kooxaha Argigixisadda ah ee Somalia, Waana Warbaahinta kaliya ee awood u leh inay tagaan Saldhigyadda Alshabaab, baahiyaana Barnaamijyo lagu buun buuniyo Kooxdaasi, iyadoona la xasuusto in Wariyayaal ka tirsan Aljazeera laga qabtay Duleedka Muqdisho, iyagoo ka yimid Saldhigyo Alshabaab, soona waraystay Afhayeenka Kooxdaas, Cali Dheere.
Soomaaliya oo ah Dal ay Dagaalo Sokeeye iyo Kuwa Diimeed isaga dambeeyeen waxay la daala dhacaysaa in ku filan Dhibaato dhexdeeda ah, tiiyoo ay hadda ugu darsan tahay in dhinacyadda Khaliijka isku haya ay ku loolamayaan Somalia, taasoo sii murjisay Xaaladdii cakirnayd ee Somalia.
Inkastoo ay Somalia ku dhawaaqday inay Xasaradda Khaliijka dhex dhexaad ka tahay, haddana ficil ahaan waxay u muuqataa inay la safan tahay Qadar marka loo eego Wafuuda Qadar ee timid Somalia xilli adag oo ay ahayd Soomaaliya inay iska xakamayso Xasaradda, kuna adkaysato Doorkeeda Dhex Dhexaadnimo, Waxaa sidoo kale loo fasaxay Hawadda Somalia inay isticmaalaan Diyaaradaha Qadar, taas badalkeedana ma jirto waxay Soomaaliya ku badalatay, sababtoo ah xittaa Qatar Airways kuma darin Duulimeedkeeda Dalalka ay tagto Somalia, taasoo oo haddii la samayn lahaa u muuqan lahayn inaan ugu yaraan wax ku badalanayn in Hawadeena la isticmaalo.
Isku soo Duub Soomaaliya waxay hadda lugaha la galaysaa Marxalad adag oo ay ka dhaxashay Hardanka Khaliijka, iyadoo aysan muuqan Dan Istaraatiijiya oo ay Soomaaliya la timid si ay ugu yaraan ugu faa’iidaysato Xaaladda taagan.
Waxay u gaar tahay HornAfrik, lama qaadan karo, iyadoo aan la xusayn Xuquuqda Lahaanshaha.